Scup: Social Media Monitoring, Nyocha na njikọ aka | Martech Zone
Satọde, Ọgọstụ 17, 2013 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Nleba anya akpọ scoop - malitere na Brazil ma ugbu a na-akwado Bekee, Portuguese na Spanish. Maka azụmaahịa na ụlọ ọrụ, Scup nwere atụmatụ niile dị mkpa nke nyocha, mgbasa ozi na nyocha.
Scup bu ihe nlekota oru nlekota ndi mmadu na eji ya eme ihe karie 22 puku ndi okachamara. Scup na-enyere ndị na-elekọta mmadụ mgbasa ozi aka ike site na ọrụ ha site na ntinye gaa nyocha, na-abawanye arụmọrụ ha nke ọma.
Atụmatụ na Uru Scup
Nyochaa mgbasa ozi mmekọrịta - Scup na-arụ ọrụ elekere 24 kwa ụbọchị, ụbọchị asaa n'izu, na-elele usoro mgbasa ozi na akpaghị aka ka ị ghara. Debanye aha isiokwu ma chọpụta ihe a na-ekwu banyere ika gị na ndị asọmpi gị na Twitter, Facebook, Youtube, LinkedIn, Vimeo, Flickr, Orkut, Instagram, Tumblr, Slideshare, Foursquare, Google, Google+, Yahoo !, blọọgụ, akụkọ, faili RSS, weebụsaịtị na ọtụtụ mgbasa ozi mmekọrịta ndị ọzọ. Họta ihe anakọtara dị ka mma, -adịghị mma na anọpụ iche dị ka nyocha gị si dị. Tinye mkpado ka ị were tụlee ihe gị.
Chọpụta - Mara onye na - ekwu maka ụdị ika gị. Enwere ike ịchọpụta ndị nwere mmetụta na ndị na - ekwu maka akara gị kachasị, naanị nkeji ole na ole mgbe imesịrị ọchụchọ gị. Ntinye mkparịta ụka ntanetị n'otu ntabi anya. Scup depụtara mkparịta ụka na mmekọrịta, yabụ ị nwere ike ilekwasị anya na nsogbu ahụ wee ghara ichegbu onwe gị banyere ịdekọ onye bụ onye.
ebipụta - Bipute na netwọkụ mmekọrịta gị site na iji Scup. Debanye profaịlụ Twitter, Facebook na Youtube na post tweets, posts mgbidi na vidiyo niile na-ahapụghị Scup. Nlekọta Scup gụnyere ọtụtụ ọkwa dabere na ikike. Centralization na-enye ohere naanị onye nlekota nlekota ijikwa profaịlụ, mana nye ndị ọrụ ndị ọzọ ikike biputere ma zaghachi. Nke a pụtara, ajụjụ “social password paswọọdụ?” ga-abụ naanị ncheta echekwara.
akuko - N'ịwa akụkọ na nyochaa nsonaazụ. Sochie ọganihu nke nlekota gị site na akụkọ eserese edepụtara site na awa, ụbọchị, izu, ọnwa ma ọ bụ afọ. Gbado anya na ozi achọrọ iji nyochaa atụmatụ gị na netwọkụ mmekọrịta. Ma oburu n’acho icho ime ka aka gi di ocha ma were oji na aru oru, nsogbu abughi nsogbu. Scup na-ebupụ ihe niile site na nlekota gị ozugbo na Excel.
Pnye ọnụahịa maka Scup bụ asọmpi na ndị kasị ewu ewu na-elekọta mmadụ media nyiwe na njem; n'eziokwu, ị nwere ike ịchekwa ego ole na ole kwa ọnwa ma e jiri ya tụnyere ihe ngwọta gị ugbu a.
Tags: ezigbo oge nlekotascupelekọta mmadụ mediamgbasa ozi mgbasa ozinyocha mgbasa ozi mmekọrịtanlekota oru mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozimgbasa ozi mgbasa ozi